.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဓါတ်ပုံတွေကို ပန်းချီပုံလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းချင်ရင် Foto Sketcher
ဓါတ်ပုံတွေကို ပန်းချီပုံလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းချင်ရင် Foto Sketcher
ဓါတ်ပုံတွေကို ပန်းချီပုံလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းချင်ရင် ဒီ FotoSketcher ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးက တော်တော်လေးကို
ကောင်းပါတယ်။ ပန်းချီပုံဆိုရင်လည်း ရေဆေး ၊ ဆီဆေး အမျိုးမျိုး ၊ ခဲခြစ်ပုံလေးတွေ အဖြစ်ရော အစုံပါပဲ။ နောက်ထပ်
တစ်ခြား Effect ဒီဇိုင်းတွေရော အများကြီးပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ဗားရှင်းလေးကို အနော် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့်ပေးထားပါတယ်။ Screenshot လေးတွေရော ပြပေးထားပါတယ်။
Download: Foto Sketcher 2.5
အောက်မှာ အနော် နန်းခင်ဇေယျာ ပုံလေးကို စမ်းကြည့်ထားတာပါ။ သဘောကျရင်လည်း ယူသွားပေါ့။
ဒီပုံလေးက Foto Sketcher ထဲက Effect တစ်ခုကို စမ်းထားတာပါ။ Effect တွေက အများကြီးရှိပါတယ်နော်..။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လာလည်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။
Posted by Thurainlin at 22:56